Archive de l'auteur | NewsMada | Page 1812
Iavoloha : tsy voaasa ny federasion’ny fanatanjahantena
Par Taratra sur 08/01/2016 Divers, NS Malagasy
Tsy fahita firy ? Tsy anisan’ireo voaasa amin’ny lanonana fifampiarahaban’ny andrimpanjakana eny Iavoloha anio ireo federasiona ara-panatanjahantena rehetra eto amintsika. Nambaran’ny tompon’andraikitra mpikarakara ny lanonana ao Ambohitsorohitra fa niainga amin’ny taratasy avy anivon’ny minisitera ihany no nanomezana ny fanasana. Avy amin’iza izany ny hadisoana na ny mety ho fanadinoana na fanilihana ? Tsy azo hadinoina fa […]
Nolanian’ny filankevitry ny Tanàna : hosokafana ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo
Par Taratra sur 08/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
« Mahita izahay fa rariny raha miroso amin’ny fahafahana miteny sy maneho hevitra isika. Mivoatra ny raharaham-pirenena. Hovahan’ny mpanolotsaina amin’izao fotoana izao ny kianjan’ny demokrasia Ambohijatovo rehefa nakaton’ny mpanolotsaina tamin’ny foton’androny », hoy i Andriambahoaka Faustin, omaly tamin’ny mpanao gazety, nialoha ny nandanian’ny mpanolotsaina izany tetsy Analakely. Nandany izany, tamin’ny alalan’ny tsangan-tanana avokoa ireo mpanolotsaina maherin’ny 40, […]
Avy amin’ny tanoran’ny fiadidiana ny Repoblika : olona sahirana 1 000 nahazo fanampiana
Par Taratra sur 08/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Nitondra fanampiana ho an’ny olona 1 000 sahirana amin’ny fokontany amin’ny faritra iva , Isotry, Ampefilohe Ambodirano, Andavamamba sy ny manodidina ny tanora ao amin’ny fiadidiana ny Repoblika, omaly. Vary 60 kitapo, siramamy 20 gony, ronona 1000, pâte 32 baoritra ary biskoy 20 baoritra no nozaraina ho an’ireo fianakaviana ireo. Nisy ny fizarana tapakila mialoha hanamarinana […]
Filankevitry ny minisitra : hanendry loholona avy amin’ireo rafitra sosialy sy toekarena ny filoha
Anisan’ny nivoitra tamin’ny filankevitry ny minisitra, afakomaly teny Iavoloha ny nanampiana tovana ny andininy amin’ny didim-panjakana, momba ny fanendren’ny filoham-pirenena ny loholona. Tafiditra ao anatin’izany ny fahazoan’ireo vondrona na rafitra ary koa fikambanana mijoro ara-dalàna manolotra olon-tokana na maromaro hofidin’ny filoham-pirenena ho anisan’ireo loholona 21 anjara tendreny, hanampy ireo 42, nofidin’ny mpifidy vaventy farany teo. […]
Taona 2015 : miisa 15 ireo zandary matin’ny dahalo
Henjana ho an’ny fianakaviamben’ny zandarimariam-pirenena iny taona 2015 lasa teo iny. Miisa 15 ireo zandary lavo am-perinasa nandritra ny fifandonana tamin’ireo dahalo. Teo koa ireo zandary nanaratsy endrika ny zandarimariam-pirenena amin’ny ankapobeny, araka ny fanazavan’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena (Seg), ny Jly Paza Didier Gérard raha nanao jery todika fohy momba ny taona 2015 nandritra […]
Centre ClayM : hampahafantarina ny momba ny AVC
Maro ireo mpamaky manaraka ny fampianaran’ny Dr ClayM eto amin’ny gazety Taratra isaky ny alarobia hoe « Ny tsara ho fantatra avy amin’ny dokotera ». Hiverina indray izany ka ny momba ny karazana AVC (fahatsentsenan’ny lalandra) no harosony manomboka ny 27 janoary izao. “Noho ny fangatahan’ny maro ny anton’io fanapahan-kevitra io », araka ny nambarany. Marihina fa mampianatra […]
Amboasary : dahalo 60 nitondra Kalach nanafika, olona iray maty
Tompon’omby iray maty tsy tra-drano notifirin’ny dahalo miisa 60 nitondra basy Kalachnikov sy basim-borona tany Amboasary, fokontany Lanivato Ikalamavony, kaominina ambanivohitr’i Mangidy ny alatsinainy teo. Araka ny fanazavana voaray, nirodorodo niditra an-keriny tao amin’ity tanàna ity ireo dahalo ka nitifitra avy hatrany ny lehilahy iray tompon’ireo omby nangalarin’izy ireo. Voalaza fa nanao fanamiana miaramila ny […]
“Villa” mihosin-dra teny Ambohidratrimo : vehivavy iray hita maty nokapaina famaky
Nihosin-dra ny tanàna. vehivavy iray feno diam-pamaky no hita tao amin’ny Parking an’ny Villa iray eny Ambohidratrimo. Novonoin’ny mpiambina ny tanàna izy io… Raha vao afakomaly no nisy renim-pianakaviana iray norasarasain’ny jiolahy tao an-tranony teny Ambavahaditokana Itaosy, ity indray teny Ambohidrarimo, andro mitovy ihany. Fatim-behivavy iray no hitan’ny tompon-trano tamina villa iray eny Ilaivola Ambohidratrimo, […]
Hampiasa olona 400… : hanaovana asa tanamaro ny fandraofana fako
Hifandrimbonan’ireo minisitera ny fanadiovana ny tanànan’Antananarivo.Omaly, nampahafantatra ny minisiteran’ny Mponina sy ny raharaha sosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy fa hanatanteraka asa tanamaro ho fandraisana anjara amin’ny fanadiovana. Mahatratra 400 ireo olona hanatanteraka izany asa tanamaro izany. Hiasa andro aman’alina eny Ambolokandrina, Ambohipo, Ankatso, Andavamamba, Ilanivato ary Anosipatrana ireo olona ireo. Sady fandraisana anjara amin’ny […]
Rabefika etsy, Rabefika eroa…
Par Taratra sur 08/01/2016 Edito Taratra, NS Malagasy
Rabefika… Tsy iza fa Rabefikasana. Be loatra ny fikasana hanorina an’itsy, hanarina an’iroa. Very anarana hoe Rabefika amin’izany izy, fa tsy firy na tsy misy tanteraka izay fikasana… lainga sy fitaka, fampandriana adrisa. Tanàna tsy ilaozan’adala, hoy ny fitenenana. Tsy ilaozan-dRabefika koa ny tanàna, ny tany sy ny fanjakana. Tsy vitan’ny hoe be fikasana Rabefika […]
Beach volley : hatao eto Dago ny “Coupe de la Nation Zone 7”
Par Taratra sur 07/01/2016 NS Malagasy, NS-Sports
Mazava. Vantany vao tontosa ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny beach volley, ny volana desambra lasa teo, tany Mahajanga, efa miomanomana amin’ny fampiantranoana ny fiadiana ny « Coupe de la Nation de la Zone 7 » ny federasiona malagasin’ny volley (FMVB) tarihin’ny filohany, Ramandimbisoa Jocelyn, amin’izao fotoana izao. Hatreto, tsy mbola fantatra mazava kosa ny torapasika […]
Beach soccer : tafiditra ao anaty «Top 30 Mondial» ny Barea
Namoaka ny filaharan’ireo firenena, amin’ny taranja beach soccer, ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa), nandritra ny taom-pilalaovana 2015 lasa iny. Tafiditra ao anatin’ireo ekipa 30 tsara indrindra eran’izao tontolo izao ny Barea de Madagascar. Laharana faha-22 mantsy no misy ny ekipam-pirenena malagasy. Tena nampisongadina an’i Madagasikara ny fahazoan’ny Barea de Madagascar ny tompondakan’i Afrika sy ny “Cosafa”. […]
Basikety – Fiba 3×3 : hiroso amin’ny fifaninanam-pirenena ny FMBB
Manomboka avy hatrany ny taom-pilalaovana ho an’ny taranja basikety. Hiroso amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara eo amin’ny Fiba 3×3 sahady ny federasiona amin’ity volana janoary ity. Tsy miandry ela. Vao miandoha ny taona, manomboka avy hatrany koa ny taom-pilalaovana 2016 ho an’ny taranja basikety. Araka izany, hiroso amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara sahady ny federasiona […]
Par Taratra sur 07/01/2016 NS Malagasy, NS-Culture
Hanan-tantara eo amin’ny tarika Rakoto Frah Junior ity taona 2016 ity. Hanamarika ny faha-15 taona nijoroany izy ireo. Hatevina ny fandaharam-potoana efa nomanin’ny tarika amin’izany. Hosokafana amim-pomba ofisialy, ny volana mey, izany fotoam-pankalazana izany. Anisan’ireo hetsika goavana indrindra, hotanterahina amin’io fotoana io, ny fitokanana ny lalana mitondra ny anaran-dRabezoza Rakoto Philibert, fantatry ny maro amin’ny […]
Par Taratra sur 07/01/2016 En Bref, NS Malagasy
Nanambara ny solontenan’ny mpampianatra eny amin’ny politeknika Vontovorona fa tsy handray ny asa fampianarana raha tsy mahazo ny tambin-karama amin’ny ora fanampiny tapany faharoa nandritra ny taom-pianarana 2013-2014 izy ireo. Hifidy izay ho filohan’ny oniversite vaovao kosa anefa izy ireo, ny alatsinainy izao. Anisan’ny mbola mamita ny taom-pianarana 2014-2015 ny eny Vontovorona satria nisy ny […]
Mirona tsikelikely any amin’ny fahapotehana ny kolontsaina malagasy. Tsy nijanona hatreo amin’ny fanekena izany ny olona maromaro fa nanangana ny Ako Miantefa. Fikambanana naorina ho amin’ny fikajiana sy fampivelarana ny kolontsaina malagasy. Raha ny fanazavan’ny filohany, manomboka amin’ny tontolon’ny hira ny fandaharanasan’ity fikambanana ity. Hitrandraka ireo hira tranainy. Hikajy izany amin’ny alalan’ny fitaovana samihafa mifanaraka […]
Androy : olona 10 000 tohanana ara-tsakafo
Par Taratra sur 07/01/2016 Divers, NS Malagasy
Hitohy hatramin’ny volana febroary ny fandraisana an-tanana ny vehivavy mitondra vohoka 10 000 sy zaza latsaky ny 5 taona tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo, nanomboka ny volana novambra lasa teo any amin’ny faritra Androy. Nisy ny fizarana fanampin-tsakafo Plumpy Sup (ahitana voanjo, siramamy, menaka, proteine azo avy amin’ny soza ary ronono) ary serealy notovonana vitamine sy singa mineraly […]
Avy tany Frantsa : hihaona amin’ny mpankafy i Black Nadia
Efa nampanantena izy nialoha ny niaingany fa tsy maintsy hisy ny seho ho mariky ny fifampiarahabana noho ny taona vaovao, eo amin’i Black Nadia sy ny mpankafy azy eto an-toerana. Fantatra, fa higadona anio rehefa avy nanatontosa seho vitsivitsy tany Frantsa i Black Nadia sy ny tariny. Manome fotoana avy hatrany ireo mpankafy azy etsy […]
Atsy ho atsy : 500 Ar isan’ora ny fiantsonan’ny fiara
Nivory omaly ny tompon’andraikitry ny “parking” ao amin’ny kaominin’Antananarivo miaraka amin’ireo mpiara-miasa ka nanapaka fa hasondrotra 500 Ar isan’ora ny saram-piantsonan’ny fiara amin’ireo toerana telo ao Analakely sy ny manodidina. Voakasik’izany ny toeram-piantsonana eo amin’ny Esplanade Analakely, Antaninarenina ary Antsahavola. Tsy mbola hihatra avy hatrany anefa izany raha tsy tafapetraka ny “horodateur”, ilay milina mamoaka […]
Apipa : halalinina ny lakandrano
Par Taratra sur 07/01/2016 Faits Divers, NS Malagasy
Ho fanalefahana ny mety hisian’ny tondra-drano amin’ny faritra iva mandritra ny fotoam-pahavaratra, miditra amin’ny fanadiovana ny lakandrano ny Apipa. Nanomboka tamin’ity herinandro ity ny fanadiovana ny lakandranon’Andriantany sy ny C3 izay tanterahin’ny Apipa. Iarahana amin’ny fanjakana foibe ny fanatanterahana ny asa raha ny fanazavan’ny tale jeneralin’ny Apipa, Rateloson Philippe. Halalinina ny lakandrano, kaohina amin’ny fitaovana […]
Kabary fifampiarahabana eny Iavoloha : andrasana izay tena fijerena ny fiainam-bahoaka amin’izay
Par Taratra sur 07/01/2016 NS Malagasy, NS-Politique
Ho taon’ny inona indray ity taona ity? Taon’ny fanadiovana tamin’ny taon-dasa, raha ny nambara herintaona lasa toy izao, ny 9 janoary 2015. Nefa ao anaty fako Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara tamin’ny faran’ny taona. Hatramin’izao, mbola tsy afaka izany. Tsy afaka faran’ny lohany, fa sasatry ny miarina sy manombo-javatra? Amin’izao lanonana fifampiarahaban’ireo filohan’andrimpanjakana miaraka amin’ny solontenan’ny masoivoho […]
Vatovavy Fitovinany : mitsipaka ny voka-pifidianana ny mpanolotsaina
« Hijoro hatramin’ny farany izahay ary efa nandefa ny fitoriana amin’ireo ambaratonga samihafa, manoloana ny tsindry sy ny fandrahonana nahazo anay mpifidy any amin’ny distrikan’i Manakara. Tsy haniky lembenana izahay fa hiaro ny zonay hatramin’ny farany », hoy ny filohan’ny mpanolotsaina any an-toerana, Tsabotokay Francis, omaly tetsy 67 ha. Notanisain’izy ireo ny tranga niseho, toy ny fividianana […]
Toliara : nampiaka-peo ireo kandidà 10
Manao ranolava tonga hatrany Toliara koa. Nivondrona ireo kandida 10 tsy lany tamin’ny fifidianana loholona hanohitra ny voka-pifidianana noho ny tsy fanarahan-dalàna nandritra ny fifidianana. Nambaran’izy ireo amin’ny mpanao gazety ny fiandohan’ny herinandro teo fa marika hafa ankoatry ny X sy lavotondro, voarakitra amin’ny lalàna momba ny fifidianana no hita amin’ireo vato. Ohatra, ny A,V,C, […]
Fadintseranana : tsy asiana resaka intsony ny tolotra ho an’ny tsy miankina
Par Taratra sur 07/01/2016 Economie, NS Malagasy
Nitondra fanazavana ny sendikàn’ny fadintseranana (Sempidou), omaly teny Antaninarenina, tohin’ilay fitsipahan’izy ireo, tamin’ny 17 desambra 2015, ny tolotra tadiavin’ny fanjakana ho an’ny sehatra tsy miankina, hanao asa fanaraha-maso aorian’ny fampidirana entana. Taorian’izay, nanome fe-potoana 48 ora ny fitondram-panjakana izy ireo ny 22 desambra. Noraisin’ny tao Mahazoarivo ka nangatahin’ny governemanta ny hidiran’io sendikà io ao anatin’ny […]
Rasolo André : “Mila sahy miatrika ny fampihavanam-pirenena isika rehetra”
Taona vaovao izao… Mby aiza ny fampihavanam-pirenena? Manazava ny avy amin’ny komitin’ny manampahaizana momba ny fampihavanam-pirenena, Rasolo André: “Raharaha iombonan’ny samy Malagasy ny fampihavanana, ka tsy hisy hanao tompony mangataka atiny isika. Samy tokony ho sahy maka ny andraikiny.” Dinidinika… Gazety Taratra (*): Aiza ho aiza izao ny firosoana amin’ny fanatanterahana ny fampihavanam-pirenena amin’izao […]
« Précédent 1 … 1 810 1 811 1 812 1 813 1 814 … 1 816 Suivant »